[Oduu Amma Nu Ga'e] Qormaatni Biyyoolessaa Kutaa 12 Addan Citeera
Qormaatni Biyyoolessaa Kutaa 12 Addan Citeera
30 May 2016 Kan maxxanse Naa'ol
Qormaatni Biyyoolessaa Addan Citeera!
Qormaatni biyyoolessa kutaa 12 addaan cituunsaa biiroo Ministera Barnoota Biyyoolessaa ibsanii jiru. Qormaanni torbaan kana raawwatamuuf kan karoorfame yoo ta’u, guyyaa har’a dirqii dhan akka addaan dhaabbatu taasifameera.
Qormaata Engliffaa Kutaa 12
Guyyaa kaleessaa, marsaalee Interneeta fi kan hawaasa kannen akka Facebook, Twitter, Whatsapp fi kannen biroos qormaatni faffaca’amee ture. Sababaa kanaan walqabateen qormaatni biyyoolessaa walumagalattii akka citu taasifameera. Qormaata fafaca’e keessa, kanneen akka Afaan Engliffaa, Herregaa, Sayansii, fi kanneen biroos midiyaale hawaasumma irratti argame.
Baratootni fi barsiisotni naanno Oromiyaa qormaata bara kanaa guyyaansaa akka dabarfamu iyyannoo kan dabarsan yoo ta’u, deebii gama biiroo Minesteraa Barnoota argame hin jiru. Sababaa mormii waa’e MastarPlaanii fi Gaaffii Abbaa Biyyuummaan kan walqabateen ji’oota afurii’ol manneen barnoota naannoo Oromiyaa cufamee ture. Baratoota naannoo Oromiyaatif qormaata bara kanaa akka sirrii hin taane ibsuu yaalamuus qormaanni kutaa 12 akka itti fufu taasimee ture.
Ta’us garuu guyyaa har’a qormaata kutaa 12 waan miliqee faffaca’eef addan cituunsaa Biiroon Ministeraa ibsaa baasanii jiru. Baratoota fi barsiisota akkasumas maatisaaniis, Biiroo Ministeraa Barnootaa dhiifama gaafatanii jiru. Qormaanni kunii guyyaa biraa akka dabarfamu ajajamuus yoomitti akka dabarfamu guyyaansaa hin murteefamne.
Odeefannoo dabalataaf Marsaa Xalayaa.com hordofaa!